महामन्त्री कोइराला भन्नुहुन्छ : राष्ट्रपति भण्डारीका कारण गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्ने जमात बढ्यो…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका महा’मन्त्री डा. श’शांक कोइरालाले रा’ष्ट्रपति विद्या भण्डारीका कारण गण’तन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्ने जमात बढेको बताउनुभएको छ । बीपी कोइराला युवा ने’तृत्व विकास मञ्चले ३८ औं बीपी स्मृति दिवसका अवसर’मा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डा. कोइरालाले रा’ष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलापले राष्ट्र’पति भण्डारी नेपालको रा’ष्ट्रपति नभई नेकपाको मात्र रा’ष्ट्रपति भएको सन्देश गएको बताउनुभयो ।
उहाँले,आम नागरिकमा कमसेकम राजा त तटस्थ हुन्थे भन्ने मानसिकता देखिएको समेत बताउनुभयो । डा. कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा इतरको समुहबाट एक जना मात्र सभापतिको उमेद्वा’र हुने बताउनुभयो । आफुहरुको समुहबाट को सभापतिको उमेदवार बन्ने भन्ने छलफल भइरहेको समेत स्प’ष्ट पार्नुभयो ।
कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने कसैले पनि म होइन हामी भनेर लाग्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। कोइरालाले राजनीतिमा लागेपछि पार्टी सभापति हुने इच्छा सवैलाई हुने भन्दै अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसमा ने’तृत्व परिव’र्तन आवश्यक रहेकाले सभापति देउवा इतरको पक्ष एक ठाँउ हुनुपर्छ ।
कांग्रेसको ने’तृत्व परिवर्तनका लागि सवैले त्यागको भावना देखाउने बेला आएको पनि स्प’ष्ट पार्नुभयो । महाविधेशनको मिति तय भइसकेपछि महाधिवेशनलाई प्र’भावित पार्नका लागि मात्र सभापति देउवाले विभाग बनाउन लागेको आ’रोप लगाउनुभयो। कोइरालाले महाधिवेशन हुनका लागि मात्र ८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा विभागमा नि’युक्त भएका साथीहरुले के काम गर्न सक्छन भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो।
कोइरालाले आफुले सभापति देउवालाई सधै सहयोग गरेको भन्दै तर सभापति पार्टीमा एकलौटी गर्न नछोडेकाले आफु पनि सभापतिका विरुद्धमा लाग्न बाध्य भएको स्प’ष्ट पार्नुभयो । महामन्त्री कोइरालाले अहिले नेकपासंग प्रतिष्पर्धाका लागि कांग्रेस एकताब’द्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसलाई एकताव’द्ध बनाउनका लागि अहिले नेतृ’त्व परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र मुलुक अब बीपी कोइरालाले देखाएको राजनीतिक आर्थिक तथा समाजिक परि’वर्तनको बाटोमा हिड्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका के’न्द्रीय सदस्य दीलबहादुर ध’र्ती, बद्रि पाण्डे गगन थापाले बीपी कोइरालाको योगदानको च’र्चा गर्नुभएको थियो ।
Previous लेखराज भट्ट : झगडाको बिउ प्रचण्ड र नेपाल हुन्, म कसैको नोकर होइन, म ओलिलाई साथ दिन्छु…हेर्नुहोस् ।
Next देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने जिम्मा हाम्रो सरकारले लिएको छ – प्रम ओली